Kulan Lagaga Hadlayay Waxqabadka Mashruuca Wash-Program - Cakaara News
Kulan Lagaga Hadlayay Waxqabadka Mashruuca Wash-Program
Jigjiga( cakaaranews ) Arbaco 16ka March 2016, Kulan lagaga wada hadlayay waxqabadkii mashruuca wash-Program islamarkaana ay kasoo qaybgaleen masuuliyiinta Xafiisyada ay bahwadaagta yihiin Xafiiska Biyaha Macdanta iyo Tamarta DDSI iyo waliba xubno kasocday Deeq-bixiyayaasha oo ah Bangiga aduunka laantiisa Adhisababa ayaa ka dhacay isla xafiiska Byaha.
Kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgalay masuuliyiinta Xafiiska Waxbarashada, Xafiiska Caafimaadka, Xafiiska Maaliyada iyo Horumarinta Dhaqalaha DDSI iyo Deeq bixiyayasha bangiga aduunka iyada oo lagaga wadahadlayo bilihii ugu danbeeyay ee waxqabadka mashruuca Wash-Program.
Hadaba Kulankan ayaa waxaa ugu hoarayn kahadlay wasiiirka Xafiiska Biyaha Macdanta iyo Tamarta DDSI marwo Fartuun Cabdi Mahdi oo sheegtay in kulankan uu yahay mid uu soo qabanqaabiayay xafiiska biyaha Macdanta iyo Tamarta DDSI islamarkaana ay isagu wada yimaadeen xafiisyada fuliya iyo deeqbixiyayaasha bangiga aduunka iyadoo lagagawada arrinsanayo waxqabadkii masruuca sadexdii bilood ee ugu danbaysay, islamarkaana lagu eegayo waxqabadka mashruca dhankiisii fiicnaa iyo dhankiisi liitay labadaba. Ugudanabayna jahooyin horumarineed la islaqaadanayo laguna saxayo hadii dhaliilo jiraan.
Sidookale waxaa kulankan kahadlay madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka waxabarashada DDSI mudane Mawliid Haayir Xasan oo sheegay in kulankani uu yahay mid caadi ah islamarkaana lagu eegayo adeegyada lagu fuliyo mashruucan Wash-Progam ee ay ugu horeeyaan adeega helida Biyo Nadiif ah, Faayo-dhawrka IWM sidookale waxa uu madaxwayne kuxigeenku tilmaamay in ka xafiiska waxbarasho ahaan ay ka soo galayaan helida biyihi iyo faayo dhawrkii goobaha waxabarashada sida iskuulada.